भुटानमा पनि ‘क्वारेन्टाइन’* को अवधि लम्ब्याइयो | Ratopati
भुटानमा पनि ‘क्वारेन्टाइन’* को अवधि लम्ब्याइयो
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeचैत १७, २०७६ chat_bubble_outline0
एजेन्सी । भुटानमा क्वारेन्टाइन*को अवधि बढाएर २१ दिने बनाइएको छ । सोमवार घोषणा गरेको २१ दिने क्वारेन्टाइन मंगलवारदेखी लागू हुने भएको छ।
भुटानका प्रधानमन्त्रीको आधिकारीक ट्वीटर एकाउन्टमा सरकारले २१ दिने क्वारेन्टाइन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । उच्च सर्तकताका लागि क्वारेन्टाइन अत्यावश्यक वाध्यता बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक भुटानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थप बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै २१ दिने क्वारेन्टाइन घोषणा गरिएको हो ।
भुटानमा सोमवारसम्म चार जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । अमेरिकाको जोन्स हकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार सबैभन्दा पहिलो बिरामी मार्च ५ मा भेटिएका थिए । ती व्यक्ति अमेरिकाका ७६ वर्षीय पर्यटक थिए । उनी भारतको आसामको समेत भ्रमण गरेर भुटान आएका थिए ।
*यसअघि क्वारेन्टाइनको साटो ‘लकडाउन’ भएकोमा भुलसुधार गरिएको छ ।
संसारको सर्वाधिक कोरोना प्रभावित देशको सूचीको सातौं स्थानमा उक्लियो भारत
चीन र अमेरिकाबीच कोसँग छ कति शक्ति ? को कसमाथि भारी ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जीवनचित्र सार्वजनिक
कम्युनिटी, युनिटी र इम्युनिटीका लागि योगाभ्यास उपयोगीः नरेन्द्र मोदी
अमरेशको प्रश्न : कोरोनामा सेना परिचालन गर्ने छुट छ ?
कोरोना जितेकी गर्भवती भन्छिन् – आत्मबल बढाए निको हुन्छ